Bilardo Oo Ka Hadlay In Messi Uu Lamid Yahay Maradona %
By Laacib News	 On Apr 2, 2018
Inkastoo uu taariikhyo fiican uu ka sameeyay kubada cagta, ayaa waxaa macalinkii hore ee qaranka Argentina wiilka lagu magacaabo Carlos Bilardo ayaa wuxuu aaminsan yahay in Lionel Messi ay wax badan uga dhiman yihiin si uu Maradona iyo Pele u gaaro.
Maradona iyo Pele ayaa waxay yihiin labo kamid ah ciyaartoydii taariikhda kubada cagta u fiicneed, iyagoona ku guuleystay wax walba oo uu ciyaaryahan ku hamiyo taasoo ah koobka aduunka, koobab kooxeed iyo abaalmarino shaqsi ah.
Hadana, si uu Messi u gaaro heerka labadaan ciyaaryahan ee u kala dhalatay Brazil iyo Argentina waxaa waajib ku ah inuu wadankiisa u qaado koobka aduunka ugu yaraan sanadkaan 2018, sida laga soo xigtay Carlos Bilardo.
“Messi mar walba waxaa lala barbardhigaan Maradona, si uu u gaaro heerkooda wuxuu ubaahan yahay in Argentina uu uqaado koobka aduunka,” ayuu usheegay laacibkaan reer Brazil, Wargeyska caanka ah ee Folha de Sao Paulo.
“Waxa ay haystaan fursad fiican,” ayuu yiri oo uu ka yiri xulka qaranka Argentina ee ku guuleysta tartanka koobka aduunka.
“Messi waxa uu u baahan yahay in la siiyo xoriyad buuxda, isagoo aan laheyn mid difaac ah.
“kooxdu waa ay xoogan tahay waana ay ka fiicantahay 2014, markaan way ku guuleysan karnaa,” ayuu sii daba dhigay.
“Waan ka fiicneyn Jarmalka,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Carlos Bilardo, kaasoo la su’aalay mid ka fiicnaa wadankiisa Brazil iyo Germany, kulankii koobka aduunka sanadkii 2014-tii, markaasoo dalkiisa 7-1 lagu soo dubtay.
Ugu dambeyn, Carlos Bilardo oo si kooban uga hadlay kulankii ay khasaaraha 6-1 ay kala kulmeen Argentina dhigooda Spain, ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in kaliya uu ahaa kulankaan mid saaxiibtinimo oo aan la gaarin koobka aduunka.
Boateng Oo Shaaciyay Inuu Fanaan Noqon Doono [Goorma?]